Home Wararka Xaalada Siyaasadeed ee dalka Itoobiya oo meel khatar sii galayso
Xaalada Siyaasada ee dalka Itoobiya ayaa sii galayso meel khatar , waxaana guud ahaan degaano ka tirsan dalka ka jirta cabsi ah in dagaal sokeeye ka dilaaco, gaar ahaan deganada ay degan qowmiyaddaha Oromida iyo Amxaaradda. Qowmiyada Tigreega ayaa sidoo kale gabi ahaanba xiriirka u jartay dowlada uu hogaamiyo Abiy Axmad.
Raysal wasaaraha Itoobiya Abiye Axmed oo dareemiaya khatarta ku soo wajahan dalkiisa ayaa ka digay in xasilooni-darro dheeri ah ay ka dhici doonta dalkiisa, wuxuuna wacad ku maray inuu cadaaladda horkeeni doono kuwii ka mas’uulka ahaa dhimashada 67 qof oo geeriyooday toddobaadkan. “Shaqaaqooyinkan aan wajanhay waxay noqon doonaan kuwa intan kasii cabsi badan oo adag, haddii aysan dadka Itoobiya midoobin oo aanay mid noqon,”
Axamad Abiye oo ayaa hadalkiisa ku daray “Waxaan si adag uga shaqeyn doonnaaa inaan xaqiijinno joogteynta amarka iyo kala dambeynta, iyo in cadaaladda la horkeeno, kuwii ka mas’uulka ahaa dhibka.”
Hadalka ka soo yeeray Abiye Axmad ayaa ah mid uu doonayo in uga hotago dhibatada soo food saaratay isaga iyo dowladiisa. Abiye Axmed waxa uu xusay in wax u muuqday dibad-bax ka dhan ahaa dowladdiisa ay si deg deg ah isugu beddeleen isku dhacyo ku saleysan jinsi iyo diin.“Waxaa jiray isku day xasaraddan loogu beddelayo mid diimeed iyo mid jinsi. Intii ay tani socotay ayaa ciidamadeenna waxay u noqdeen dhibanayaal”.
Waxaa si ku talagal ah loo burburiyay guryo, ganacsiyo iyo goobo lagu cibaadeysto l, islamarkaana tiro dad Ethiopian ah oo aan si rasmi ah loo ogeyn ay barakaceen.
Dhanka kale waxaa iyagana socdo rabashadaha uu hogaanka u hayo siyaasiga Jawar Mohamed oo u ololeeya dadka Oromada. Jawar ayaa la rumeysan yahay inuu ahaa ninkii dhiir-geliyey dibad-baxyadii Itoobiya ka dhacay sanaddii tagtay, ee hoggaamiyey in ra’iisul wasaare Abiy Ahmed uu la wareego talada dalka.